स्वास्थ्य Archives - VOICE OF NEPAL TV
स्वास्थ्य ब्युरो। तपाईंले बेस्सरी टाउको दुख्ने माइग्रेन रोगका बारेमा त पक्कै सुन्नुभएको होला । विश्वभरिमा एक अर्ब व्यक्ति माइग्रेनबाट ग्रस्त छन् । कुनै माइग्रेनमा हल्का मात्र टाउको दुख्छ भने कुनै माइग्रेनमा चाहिँ टाउको फुट्ला झैं गरी दुख्छ । माइग्रेन दिमागको एक भागमा मात्र हुन्छ र यो दुई घन्टादेखि ७२ घन्टा...
स्वास्थ्य ब्युरो। सान फ्रान्सिस्को, २२ पुस -दैनिक आठ घण्टाभन्दा कम सुत्ने मानिसमध्ये धेरैमा मानसिक तनाव एवम् निराशा (डिप्रेसन)को समस्या देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको विघम्टन विश्वविद्यालयलले हालै गरेको एक अध्ययनले सो तथ्य पत्ता लागेको जनाएको थियो । सुत्ने समयावधि र मानसिक ...
टन्सिल मानिसलाई लागिरहने मध्येको एउटा रोग हो । यसले धेरैलाई सताउने गरेको छ । मौसममा आउने परिवर्तन, चिसो तातो खान आदिका कारण टन्सिल हुने गर्छ । टन्सिल भएसँगै खान र पिउन निकै समस्या हुन जान्छ । तसर्थ हामी आज टन्सिलको घरायसी उपचार बारे जानकारी दिने प्रयास गर्ने छौं । किन हुन्छ टन्सिल ? हाम्रो जिब्रोको ...
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या १ करोड नाघेको छ । बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको प्रेस विफ्रिङमा प्रवक्ता डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलले हालसम्म १ करोड ९२ हजार १ सय ६४ जनालाई भाइरस विरुद्धको खोप लगासकेको जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये ४६ लाख ६७ हजार ३ सय २८ जनाले दुवै डो...
- स्वास्थ्य ब्युरो। बिहान उठेर धेरै मान्छे चिया र कफी वा खाजामा फलहरु खाने गर्छन् । तर यो शरीरको लागि कत्तिको लाभदायक छ त ? दिनभर उर्जावान बन्नको लागि बिहान खाजा खानु आवश्यक छ । खाजामा पोषणले भरिएको खाद्यपदार्थ पनि खानुपर्छ । तर कैयौ पटक जानकारीको अभावमा मान्छे खाजामा गलत खानेकुराको सेवन गर्ने गर्छन् । जसको...
- स्वास्थ्य ब्युरो। जीवनशैलीमा आएका परिवर्तनका कारण मानिसहरूको खानपान बदलिएको छ । यसले गर्दा मानिसहरू आजकल छिट्टै बिरामी भइहाल्छन् । यही क्रममा हड्डीहरू पनि कमजोर हुन थाल्छन् जबकि शरीर अड्याउने नै हड्डीले हो । यी खानेकुरा खानुभयो भने हाड बलियो हुन्छ । बदाम बदाम स्वादिष्ट त हुन्छ नै, स्वास्थ्यका लागि...
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीले भदौ १३ देखि १८ गतेसम्म फिलिपिन्समा हुने एभिसी सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा सहभागि हुनबाट बन्चित भएको छ । एभिसीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको समूह तालिकामा ८ टोलीको मात्र सहभागिता रहने भएको छ । समूह ‘ए’ मा आयोजक फिलिपिन्स, कजकास्तान र चाइनिज ताइपेइ छन् । समू...
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकमा १८७५ जना कोभिड बिरामी थपिएका छन् । १० हजार ५०४ नमुना पीसीआर र एन्टीजेन परीक्षण गर्दा ती संक्रमित थपिएका हुन् । बिहीबार संक्रमित हुने दर १७.८५ प्रतिशत छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २९ जनाको कोभिडको कारण ज्यान गएको छ । १२८६ जना निको भएका छन् । निको हुने दर ९४.५ प्रतिशत छ । ...
एजेन्सी रिसाएको पार्टनरलाई फकाउनका लागि चकलेट दिने ट्रेन्ड निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । तर चकलेटले रिसाएको पार्टनरलाई फकाउनुका साथै अन्य कुरामा पनि फाइदा पुर्याउँछ । डार्क चकलेट खाँदा हाम्रो शरीरले थुप्रै फाइदा पाउँछ । हरेक वर्ष ७ जुलाईमा वर्ल्ड चकलेट डे पनि मनाइन्छ । आउनुहोस्, चकलेटले शरीरलाई पुर्याउने फाइद...